Fifandraisana iraisam-pirenena · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fifandraisana iraisam-pirenena · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Fifandraisana iraisam-pirenena tamin'ny Aogositra, 2012
Afrika Mainty30 Aogositra 2012
'Tsikelikely no ahitantsika fa ny vola Angole dia manomboka mahazo vahana amin'ny fandraharahana sy ny sehatra ara-toekarena any Portiogalyl.' Araka ny fijerin'ny mpiampiasa aterineto iray dia tena fifanoherana tanteraka izany ho an'ny 70%n'ny mponina any Angola izay tsy mikiraro, voky rivotra,(ary) miaina anaty trano tsizarizary.
Mampikorontan-tsaina An'i Zeorzia Ny Sarin'ady Ataon'i Rosia
Azia Afovoany sy Kaokazy28 Aogositra 2012
Amin'ity Septambra ity, miomana ny hanao ny 'Caucasus-2012' miaraka amin'ireo tafiky avy amin'ireo faritra nihataka tamin'i Zeorzia, faritanin'i Abkhazia sy Ossetia Atsimo. Caucasus-2012 dia hatao any amin'ny faritra Kaokazy Avaratra, ary hahitàna fandraisan'anjaran'ny [ru] miaramila 8.000, hatraminà fitaovana mavesatra, artillerie, sambo, ary fiaramanidina mpiady. Io no ho fanazarantena lehibe indrindra...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Aogositra 2012
Video: Hetsika Teto Aho – Asa Soa Madinika Manova Izao Tontolo Izao
Amerika Avaratra21 Aogositra 2012
Andao hiaraka aminay fa hitanay ny fiovan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo hetsika madinika natao nandritra ny Fanentanana Teto Aho amin'ny Andron'ny Firenena Mikambana Ho amin'ny Fanampiana Mahaolona Manerantany. Fomba iray hanekena ny asa vita tamin'ny fanampiana mahaolona manerantany ny alahady 19 aogositra; nanao fanasaha ho an'izao tontolo izao ny Firenena...
Afrika Mainty20 Aogositra 2012
Fanadihadiana iray nataon'ny The Economist Intelligence [en] momba ireo tanàn-dehibe eran'izao tontolo izao azo iainana tsara (ny tatitra manontolo amin'ny endriny pdf) , no manolotra hoe amin'ireo tanàna 10 sarotra iainana indrindra eto ambonin'ny tany, 6 no aty Afrika. Kanefa, misy fandaharana iray hafa mampiseho fa sambatsambatra kokoa any amin'ny...
Okraina, Rosia: Resabe Momba Ny Toerana Nahaterahan'Ireo Mpifaninana Amin'ny Lalao Olaimpika
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Aogositra 2012
Tsara, fa tsy loharanom-baovao iray tena azo iankinana momba ireo mpikambana ao anatin'ny ekipa Rosiana teraka tany ivelany ny vohikala ofisialin'ny Lalao Olaimpika 2012 ao Londona. Nangataka fanitsiana, nanomboka fanentanana fanoherana amin'ny alalan'ny fanoratana taratasy ireo Okrainiana mpampiasa aterineto, ary na ny Minisitry ny Raharaham-bahiny aza dia tafiditra anatin'izany tamin'ny...
Rosia03 Aogositra 2012